Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Flights na Flyr na Vueling si Milan Bergamo ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Milan Bergamo kwupụtara mgbakwunye nke ndị mmekọ ụgbọ elu ọhụrụ abụọ maka oge oyi 21/22, na -akwado ọbịbịa Flyr na Vueling n'ọnwa ndị na -abịa.
N'iji ụgbọ elu ụlọ ebido na June, Flyr na-amalite ụgbọelu Norwegian gụnyere Milan Bergamo n'etiti ụzọ mbụ nke mba ụwa.
N'ịkwalite njikọ Milan Bergamo, Spanish LCC Vueling ga -amalite njikọ na Paris Orly site na 2 Nọvemba.
Flyr ga-amalite ọrụ izu abụọ kwa izu na ntọala ya na Oslo, Norway malite na Jenụwarị 5, 2022.
Izu a Ọdụ ụgbọ elu Milan Bergamo ekwuputala mgbakwunye nke ndị mmekọ ụgbọ elu ọhụrụ abụọ ga -esonye n'ọdụ ụgbọ elu n'oge W21/22. N'iburu ngụkọta nke ndị na -ebu ụgbọ mmiri ise a nabatara na mpịakọta ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ Lombardy n'afọ a, ọdụ ụgbọ elu ekwenyela ọbịbịa Flyr na Vueling n'ọnwa ndị na -abịa.
Na-ebido na June site na iji ụgbọ elu ụlọ, ụgbọ elu mbido Norwegian Na-efe efe agụnyere Milan Bergamo n'etiti ụzọ mbụ nke mba ụwa. Imepe ebe ọhụrụ na-aga Lombardy catch, ụgbọ ala dị ọnụ ala (LCC) ga-amalite ọrụ izu abụọ kwa izu na ntọala ya na Oslo site na 5 Jenụwarị 2022. Ijikọ njikọ ọdụ ụgbọ elu dị na Sandefjord Torp, Na-efe efeNjikọ aka ya na Oslo ga -apụta na ọdụ ụgbọ elu Italiantali ga -enye Norway oche 756 kwa izu n'oge oge oyi.
Ịkwalite ọzọ Milan BergamoNjikọ ya, Spanish LCC Vueling ga -amalite njikọ na Paris Orly site na 2 Nọvemba. Na-ebido ọrụ ugboro atọ kwa izu, nhazi ụgbọ elu ọhụrụ nke IAG Group site na isi obodo France ga-akwalite netwọkụ ọdụ ụgbọ elu siri ike na France. Na -enye ngụkọta oche 5,190 kwa izu maka mba ọdịda anyanwụ Europe, VuelingNjikọ ya na Paris Orly ga-abụ ebe Bergamo nke asaa nke French, sonyere Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais, Paris Charles de Gaulle, Tarbes-Lourdes na Toulouse.
N'ikwu okwu banyere ọkwa ụgbọ elu ọhụrụ na ọkwa njedebe, Giacomo Cattaneo, onye isi ụgbọ elu azụmahịa, SACBO na -ekwu, "Ọ na -atọ m ụtọ mgbe niile ịnabata onye ọrụ ụgbọ elu ọhụrụ, ịkpọsa abụọ n'otu oge dị oke mma, ebe ma ndị na -ebu ya na -agbakwụnye ebe mara mma n'okporo ụzọ anyị. netwọk na ịmata ikike nwere ike si Milan Bergamo. Site na mgbakwunye ọhụrụ anyị enwere m nganga ikwenye na anyị nwere ụgbọ elu 16 na -eje ozi ebe 114 na mba 39 sitere na mpaghara Lombardy bụ ngosipụta na ntụkwasị obi onye ọ bụla nwere maka ịmaliteghachi na mgbasawanye na ọdụ ụgbọ elu anyị. ”
Cattaneo na -agbakwụnye, "Anyị nwere ọtụtụ ụgbọ elu ọhụrụ na -esonyere anyị yana World Routes na Milan na ngwụsị izu a, nke a bụ oge zuru oke maka ụgbọ elu ndị ọzọ ịbịa gwa anyị okwu, bụrụ akụkụ nke ohere na ọdịnihu dị na Milan Bergamo."